Amaswidi → okokuphromotha • Imidwebo yekhompyutha ye-P & M yobungcweti
Amashati, eduze komakhelwane ibhulukwe i Izikibha, isethi eyisisekelo yokugqoka kwabasebenzi emikhakheni eminingi. Ziphinde futhi zibe yisiphathi esihle kakhulu sokukhangisa inkampani, iklabhu noma umcimbi, ngoba hhayi ngokubeka uphawu kuphela, kodwa nangombala wokugqoka, zingabonakala ngophawu. Ama-sweatshirts anikeza ukufudumala, avumela inkululeko yokuhamba kangcono kunejazi, futhi avikele nezingubo zangasese.
Amaswidi - imfashini ihambisana nenduduzo
Kwethu isitolo uzothola Ukukhetha okubanzi kwama-sweatshirts wokukhangisa ngezinhloso ezahlukahlukene. Amamodeli esiwanikezayo enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme eziqinisekisa impilo ende yomkhiqizo.
Ngenxa yezindawo zabo, ama-sweatshirts avikela umzimba kahle kakhulu ezimeni zezulu ezahlukahlukene. Izinhlobonhlobo zamamodeli zivumela ukuthi zisetshenziswe kuzo zonke izinkathi zonyaka unyaka wonke. Ngokuya ngesimo sezulu noma izimo zokusebenza, ungakhetha kusuka kuzinguqulo ezifudumele, zasebusika nezincane zasehlobo, kanye nama-jumpers entwasahlobo nasekwindla athe ngci.
Comfort kanye nokusebenza
Sazi kahle kamhlophe ukuthi amakhasimende ethu anezidingo ezahlukile zokuthenga ezingaphumi kuphela ezimeni zokusebenza, kodwa futhi nasekuthandweni ngazinye. Ngokwazi lokhu, saqikelela ukuthi amaswidi anikezwe ekuthengeni kwethu anezici ezivikela ukungcola, ukuxwayisa nokuvikela ezintweni ezingamakhemikhali eziyingozi.
I-Comfort, kanye nokusebenza kwayo, nayo ibaluleke kakhulu. Kungakho amamodeli amaningi afakelwe ukwamukelwa okhululekile entanjeni nasezandleni ukuze aqinisekise ukufakwa okuphezulu kokushisa futhi avikele izambatho zangasese zomqashwa kumonakalo noma ukungcola. Amanye ama-sweatshirts athungwe izinto ezikhethekile ezikhulisa ukumelana kwemishini kwezinto ezisetshenziswa kakhulu emonakalweni ngenxa yokusetshenziswa okwandayo (isb. Ama-elbows).
Izinkampani eziningi ziyakwazisa ubuntu nobuntu, ikakhulukazi uma abasebenzi bedlala indima emele ukuxhumana nabantu abangaba nosonkontileka kanye namakhasimende. Ngemuva kwalokhu kuhola, kufanelekile ukukhetha indlela yokumaka esezingeni eliphakeme ezokwazi ukumelana nomonakalo, ukuqunjelwa nokugeza ngamazinga okushisa aphezulu. Ngakho-ke, sincoma ukuthi kube nokwenziwa komuntu okuhlala isikhathi eside nenhle ukugqokwa kwamakhompyutha.
Imifekethiso yekhompyutha ezingutsheni
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi izingubo eziphrintiwe ziyinto ethandwa kakhulu yezingubo zezinhlobonhlobo zemicimbi yangaphandle, izikhungo zabamele, izingqungquthela nokuqeqeshwa. Izembatho ngemibala yenkampani noma yeklabhu enziwe ngezifiso zinomphumela omuhle esithombeni somkhiqizo futhi zandisa udumo lwazo.
Sinikeza ama-sweatshirts avela ezinkampanini ezifana neReis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot ne-Adler. Ukuthengisa kufaka phakathi: uboya, izikibha zokusebenza, ama-sweatshirt e-polypropylene, ama-sweatshirt okuxwayisa, ama-sweaters.
Sikulawo amandla akho ekukhetheni nakwenziwe ngezifiso zemikhiqizo. Sinesipaki somshini esithuthukile esisinikeza umsebenzi osebenza kahle kanye nekhwalithi ephezulu kumakhasimende ethu. Uhla oluphelele lwamamodeli lungathengwa zombili esitolo sethu se-inthanethi www.pm.com.pl noma esitolo sethu kwa-Allegro "PRODUCER-BHP". Uma ufuna ukubona ama-oda wethu wokufekethisa oyisampula, sicela uvakashele ithebhu mayelana i-firmie.
sweatshirt ekhombisasweatshirt ngumbethesweatshirt enophawu lwentengisosweatshirt nezibonisiamaswidi ngaphandle kwe-hoodokokuphephaamashembe abantu abasebenzayoamashethi omsebenziamashembe esikoleamaswidi enkampanisweatshirts yasekwindlaama-sweatshirts ehloboukukhangisa amashethiizikebhe zokukhangisa zesikebheukukhangisa amaswidi amaswidiukukhangisai-unisex sweatshirtsamaswidi entwasahloboama-sweatshirts afakiweamaswidi ngamaphaketheamaswidi ngamaphrintasweatshirts ebusikaamashembe abesifazaneamaswidi amadodaama-sweatshirts amahle kakhulu wokukhangisaezempilo nezokuphephaizingubo zabasebenziizingubo zokukhangisaIzingubo zomsebenziamasudi ezemidlaloamasotshi wokukhangisa ashibhile
5 / 5 ( 7 amavoti )